आज काग तिहार कागकाे पुजा गरि मनाईदै
गृहजिल्लामै लखेटिए गोकुल बाँस्कोटा, आ’गो लागाउन खोजियो
हेर्नुहोस खुशि को खबर श्वेता खड्का आमा बन्दै…
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न, बैठकमा के-के भए निर्णय?
देउवाको प्रश्न- भोट दिनेबेला नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो?
ट्या’क्टर दु’र्घटना हुँदा यति धेरैको भयो घ’ट्नास्थलमै मृ’त्यु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रा’ जीनामा दिदै ?
कसरी अघि बढ्छ अबको प्रक्रिया ?
मन्त्री बन्दै रामकुमारी झाँक्री (भिडियो हेर्नुहोस् )
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आज काग तिहार कागकाे पुजा गरि मनाईदै
काठमाडौं, २८ कात्तिक । यमपञ्चककाे पहिलाे दिन मनाइने काग तिहार यसपाली भने यमपञ्चक सुरू भएकाे दाेस्राे दिन अर्थात् आज मनाइँदै छ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार विधिवत् रूपमा हिजाे बिहीबारबाट नै सुरु भएको हाे ।
भाेलि शनिबार बिहान कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मीपूजा परेको समितिकाे भनाइ छ । अपराह्न १:४९ बजेपछि औंसी तिथि लाग्ने भएकाले साँझ लक्ष्मीपूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । यसैगरी गाई, गोरु र नेवार समुदायको म्हपूजा आइतबार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस वर्ष भाइटीका भने मंसीर १ गते परेको छ । भाइटीकाको उत्तम साइत बिहान ११:३७ बजे रहेको पञ्चाङ्ग समितिले जनाएको छ ।
नेकपा बिवाद-शिर्ष नेता आ-आफ्नै रणनितिमा
एक लाख २२ हजारसहित आठ जु’वाडे प’क्राउ
आन्दाेलनकाे पुर्व सन्ध्यामा नेबिसंघकाे सिटि जुलुस
नेपालमा पनि भोलिबाट टिकटक बन्द हुँदैछ , कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला